Hakadkii La Galiyey Horyaalka Premier League Ilaa Dhamaadka Bisha Soo Socota Ee April Oo Hadana War Cusub Ka Soo Baxay Isla Horyaalkan Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Madaxda horyaalka Premier League ayaa ka fiirsanaya inay qaataan ‘nidaamka Koobka Adduunka’ oo kale, isla markaana la kala dheereeyo ciyaartoyga iyo qoysaskooda si horyaalka xili ciyaareedkan loogu dhamaystiri karo bilaha June iyo July.
Horyaalka Premier League ayaa hakad la geliyey ilaa 30 April maadaama Coronavirus uu dunida ku faafay, waxaana jira walaac ah in aan xilligaasna la awoodi doonin in dib loo bilaabo ciyaaraha, laakiin Premier League ayaa ka fikiraya sidii ay ula iman lahaayeen qorshe ciyaartoyga kooxaha lagu xaraynayo meelo u gaar ah oo aanay cid kale soo dhex-galaynin si la mid ah Koobka Adduunka.
Sida uu qoray wargeyska Independent ee kasoo baxa UK, toddobaadkii hore dhamaadkiisa waxay masuuliyiinta kubadda cagta Ingiriisku kulan ay yeesheen iskula soo qaadeen inay qaataan nidaam cusub oo ah in dhamaan 20-ka kooxood ciyaartoygooda lagu xareeyo xarumo tababar ay ku qaataan oo aanay dibedda uga bixin illaa inta tartanka Premier League la dhamaystirayo, halkaas oo kaliya marka ay ciyaarayaan laga qaadayo, dibna loogu soo celinayo.
Qorshahan ayaa waxa ku jirta in garoomadu madhnaadaan oo dadku telefishannada kaliya kala socdaan ciyaaraha, si aanu caabuqa Coronavirus usii fidin.
Dawladda ayaa la sheegay inay qorshahan soo dhoweysay, isla markaana ay ku waafaqdan in qaabkan uu yahay ka ugu habboon ee lagu dhamaystiri karayo horyaalka Premier League, iyadoo sidoo kaelna aanay saamayn ku keenayn faafidda caabuqa.
Ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha ayaa sidoo kale uu qorshahani sheegayaa in la kala dejinayo laba meelood, iyadoo baadhitaanno joogto ahna la samaynayo.
Wariyeyaasha iyo duubeyaasha ciyaaraha ayaa sidoo kale lagu soo qaaday kulanka, waxaana fikradihii lasoo jeediyey ay u bateen in telefishannadu ay soo gudbiyaan wariyeyaashooda iyo sawir-qaadeyaashooda si iyagana loo geliyo karantiil oo meel gaar ah loogu xareeyo, isla maalinta ciyaartana laga soo saaro.
Sida uu wargeyska Independent sheegay, hal walaac oo aan laga jawaabin ayaa kulankaas kasoo baxay, waxaanay ahayd su’aal ahayd: “Halkee la geynayaa marka ciyaartoy uu dhaawacmo ama uu lug ka jabo, maadaama cusbitaalladii walaac weyn ka jiro, isla markaana aanay kooxuhu lahayn cusbitaallo u gaar ah?”
Su’aashan oo aan jawaab waafi ah laga bixinin, ayaa afkaartii waxa ku jirtay in loo baahan yahay in Premier League uu yeesho cusbitaal u xidhan oo ciyaartoyga oo kaliya lagu daaweewo.